RW Rooble oo gaaray Boqortooyada Sacuudi Carabiya | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo gaaray Boqortooyada Sacuudi Carabiya
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil garsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray waddanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu ku tagay booqasho rasmi ah.
JIDDAH, Sacuudi Carabiya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo ay uga billaabaneyso booqasho rasmi ah ee uu ku tagayo waddankaasi.
Mas’uuliyiin ka tirsan Boqortooyada ayaa soo dhaweeyay, iyadoo marka uu guto cumrada uu kulamo la yeelan doono madaxda boqortooyada Sacuudi Carabiya.
RW Rooble ayaa galinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Jiddah, waxa uuna usii gudbay magaalada Makkah si uu usoo Cimreysto, iyadoo intaa kaddibna ay ubillaaban doonto booqashada iyo kulamada muhiimka ah ee lagu wado inuu la yeesho mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Riyaad.
Xiriirka dowladaha Sacuudiga iyo Soomaaliya ayaa gaabis ku yimid kaddib markii uu soo if-baxay khilaafkii ka dhaxeeyay waddamada Khaliijka, inkastoo mar dambe lagu guuleystay in la xalliyo, dowladda Soomaaliya ayaa garab istaagtay dowladda Qatar, waxayna dkwladaha Sacuudiga iyo Imaaraat kaga soo hor jeesatay arrinka la isku hayay.